पति अर्कै केटीसँग लागेको आशंका छ ? यसरी दिलाउनुहोस् अफेयरबाट मुक्ति - Naya Pusta
पति अर्कै केटीसँग लागेको आशंका छ ? यसरी दिलाउनुहोस् अफेयरबाट मुक्ति
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ चैत्र १ ०६:४८ 3
एजेन्सी । दाम्पत्य जीवनमा कयौँ समस्याहरु देखा पर्ने गर्दछन्। जसमध्ये कुनै समस्या घरेलु हुने गर्दछन् भने केही मानसिक।
आज हामी तपाईको बैवाहिक जीवनमा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। जब पतिको अफेयर अर्कै युवतीसँग चलेको आशंका भयो वा थाहा भयो भने पत्नीलाई तनाव हुने गर्दछ। यदी तपाई पनि आफ्नो पतिको अफेयरका कारण तनावमा हुनुहुन्छ भने आज हामी उक्त अफेयर छुटाउने उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। जुन उपाय अप्नाउँदा तपाई यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ।
१) सिन्दुरको उपाय : सिन्दुरको उपायबाट आफ्नो पतिको एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयरबाट बचाउन सक्नुहुनेछ। यसका लागि आइतबारका दिन राति सुत्नुअघि एक चुट्की सिन्दुर उक्त भागमा राख्नुहोस्, जुन भागमा तपाईको पति सुत्नुहुन्छ। तपाई सिन्दुरलाई पतिको सिरानीको मूनी राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि बिहान चाडै उठेर स्नान गरी माता पार्वतीको आराधना र प्रार्थना गर्नुहोस्। यसो गर्दा पति पत्नीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने गर्दछ। दुबैबीच प्रेम बढ्ने गर्दछ र एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयरबाट छुटकारा मिल्ने गर्दछ।
२) लड्डुको उपाय : बिहीबारका दिन ३०० ग्राम लड्डु, पिठोको दुई वटा डल्ला, ३ वटा केरा रु भिजेको चनाको दाल आफ्नो बाच्छोलाई दूध पिलाइरहेको कुनै गाइलाई खुलाउनुहोस्। गाईलाई खुवाउँदै हाम्रो वैवाहिक जीवन सुखद रहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। यसो गर्दा केही दिनभित्रै पति पत्नीको बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउने गर्दछ।
निर्मला हत्या प्रकरण: प्रमाण लुकाएको आरोप लागेका प्रहरी धरौटीमा रिहा
कामदार बोकेको बस दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु, २४ घाइते